ပြည်ခိုင်ဖြိုးသည် အစိုးရနှင့် တိုင်းပြည် အကျပ်အတည်းရောက်အောင် ပြုလုပ်နေသည့် လက်မည်းကြီးမ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊စက်တင်လာ ၂၂- ပြည် ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် အစိုးရနှင့် တိုင်း ပြည်အကျပ်အတည်း မရောက် ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်နေ သည့် လက်မည်းကြီးမဟုတ်ကြောင်း နှင့် တိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်နှင့် ဆူ ပူမှုတွေဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုဒုက္ခ ရောက်မယ့် ကိစ္စမျိုးဘယ်တော့မှ မလုပ်ဟု ပါတီဗဟိုအတွင်းရေး မှူးဦးပိုက်ထွေးက ပြောသည်။
ယခုအခါ တရားဥပဒေစိုး မိုးမှု လျော့နည်းနေခြင်းနှင့် စီးပွား ရေးအကျပ်အတည်းများ၊ နိုင်ငံ တကာဖိအားများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက နောက်ကွယ် ကလုပ်ဆောင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲ ပြောဆိုနေကြသည်များရှိကြောင်း ယင်းပါတီ ဗဟိုအတွင်းရေးမှူး ဦးပိုက်ထွေးက စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအ ပြီးတွင် ပြောသည်။
“”တချို့ တချို့တွေသုံးသပ် တာတွေရှိတယ်။ တချို့ တချို့တွေ ပြောကြတာတွေရှိတယ်။ အစိုးရပဲ လုပ်တတ်တယ် အတိုက်အခံမ လုပ်တတ်ဘူး၊ တချို့ကျတော့လည်း တစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီက လုပ်တာပဲ၊ လက်မည်း ကြီးလို့ပြောကြတယ်။ ကျွန်တော် တို့က ဘယ်တော့မှ တိုင်းပြည်ပျက် အောင်မလုပ်ဘူး။ ဘယ်တော့မှ ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်အောင် မလုပ်ဘူး၊ တိုင်းပြည်ပြိုကွဲပြီးတော့ မှ မတည်မငြိမ်နဲ့ ဆူပူမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှ ပြည်သူလူထု ဒုက္ခ ရောက်မယ့်ကိစ္စမျိုး ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး””ဟု၎င်းကပြောသည်။
ပါတီ၏ မူလခံယူချက်ကိုက ပါတီအကျိုးနှင့်နိုင်ငံအကျိုးယှဉ် လာပါ နိုင်ငံအကျိုးကို ဦးစားပေးရ မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အတိုင်းကြည်ဖြူစွာ အစိုးရ တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်မှာ သာဓကဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကပြော သည်။ယခုအတိုက်အခံ ပါတီတစ် ရပ်ဖြစ်နေသည့်အခြေအနေတွင် မိမိတို့ရရှိခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံ များအပေါ်အခြေခံ၍ အစိုးရကို ထောက်ပြဝေဖန် အကြံပြုချက်များ ပြုလုပ်နေကြောင်း လွှတ်တော်အ တွင်းတွင်လည်း ရှိသောအင်အား ဖြင့် အဆို၊ မေးခွန်းများဖြင့် ထောက်ပြဝေဖန်ခြင်းများ ဆောင် ရွက်နေကြောင်း ၄င်းက ပြော သည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးအနေဖြင့် တစ် နိုင်ငံလုံးတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုး ရေး ချို့ယွင်းလာသည်ကို အလုပ် ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်၍ ပြည်သူနှင့် အစိုးရသိအောင် ထောက်ပြအကြံ ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့ စီးပွားရေးကျ ဆင်းနေမှုကိုလည်း စီးပွားရေး ဖိုရမ်ကျင်းပပြီး အတွေ့အကြုံရှိ စီးပွားရှင်၊ ပညာရှင်များ ဝန်ကြီး ဟောင်းများဖြင့် ထောက်ပြအကြံ ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အ ရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အကြံ ပြုချက်များဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။
မည်သို့ပင် အကြံဥာဏ်များ ပေးစေကာမူ တကယ်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရမည်မှာ လက်ရှိအစိုး ရဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအစိုးရ အ ကျပ်အတည်းဖြစ်ရန်နှင့် တိုင်းပြည် စီးပွားရေးကျဆင်းရန်၊ တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး လျော့နည်းရန်၊ နိုင်ငံတကာဖိအားများ ပိုမိုမြင့် တက်လာရန် မည်သူကမှလုပ်ဆောင်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ လက်ရှိ အစိုးရသာဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ် လာမည့်ကိစ္စများကို ကြိုတင်မျှော် တွေးရမည်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာ ပြီဆိုပါက မည်သို့အကောင်းဆုံး နည်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဆိုသည့် အရည်အချင်း၊ အတွေ့အကြုံ၊ ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အမြော်အမြင်များရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြော သည်။
“”ဒါတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ရမှာ ဘယ်သူ့ကြောင့်မှ မဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်သူမပြုမိမိမှုပဲ၊ ကိုယ်လုပ် နေတာ ကိုယ့်ကြောင့်လို့ပဲပြော ချင်ပါတယ်””ဟု၎င်းက ပြောသည်။
အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ကို ကူညီနိုင်ရန် နည်းလမ်းရှာလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် UNA အဖွဲ့ဝင်များ ရခ??